Daawo Sawirro: Saameyntii uu reebay Qaraxii xalay gil gilay magaalada Muqdisho - iftineducation.com
Daawo Sawirro: Saameyntii uu reebay Qaraxii xalay gil gilay magaalada Muqdisho
iftineducation.com – Qaraxyo xoogan oo xalay gil gilay magaalada Muqdisho ayaa geystay khasaare aad u xoogan oo isugu jiray, dhimasho, dhaawac iyo bur bur dhismayaal ka ag dhowaa halka qaraxa ka dhacay ee agagaarka Taaladii SYL.
Dadka reer Muqdisho ayaa qaraxan ku tilmaamay kii ugu cuslaa ee soo mara magaalada, intii qaraxyada ka dhacayeen sanadihii la soo dhaafay.
Qaraxan ayaa ka dhashay gaari kuwa xamuulka ah oo si aad ah looga soo buuxiyay oo ka dhacay agagaarka Taalada SYL, waxaana uu dumiyay dhismayaal uu badankood dhulka soo dhigay.
Dhismayaal ku yaallay Inta u dhaxeysa Gurigii Hooyooyinka illaa ilinka Madaxtooyada ayaa dumay, waxaana ka mid ahaa guryo ku yaalay Ex Fiyoore, guryo ku yaalay Barxada iskaashatooyinka iyo guri ka fogaa halka qaraxa ka dhacay.
Ka sokow dhismayaasha uu bur buriyay qaraxa waxaa uu god ka qoday bartamaha laamiga, waana arrin aad dadka u hadal hayeen.
Wasiirka Amniga Gudaha C/risaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in gaariga qarxay uu siday tan dhan 200Kg waxyaabo qarxa ahaa, isla markaana uu aad uga xooganaa qaraxii Hotelka Jazeera ee sanadkii hore lagu weeraray.
Laamaha ammaanka ayaa sheegaya in qaraxaas aanu bartilmaameedkiisa uusan gaarin, isla markaana ay dhici laheyd khasaare intaa ka badan, waxaana ciidamada ay toogteen dabley hubeysan oo isku dayday in markii qaraxa dhacay inay Hotelka galaan.
Al-Shabaab ayaa barahooda Internet-ka ku soo qoray inay ka dambeeyaan qaraxan, waxaana qaraxan ku dhintay illaa 15 ruux dad kor u dhaafay oo ay ku jiraan askar iyo dad shacab ah oo qaarkood firirada ugu tagay guryahooda iyo kuwo wadada marayay.
Haweenka oo La Ogaaday in Ay Waxyaabo Badan Kaga Fiicanyihiin Raga